सम्पादकीय Archives - Page3of5- NepalPatra.com
अाईपीएलमा नेपाली बलर सन्दीपकाे ठुलाे सफलता
नेपालपत्र, ६ जेठ २०७५ । नेपाली क्रिकेटका युवा खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई डिल्ली डियरडेभिल्सले अनुबन्ध गरेसँगै उनकाे चर्चा चुलिएकाे थियाे । त्यतिमात्र हाेईन याे पटककाे अाईपीएल नेपालीका लागि सन्दीपका कारण धेरै लाेकप्रिय भएकाे थियाे र उनकाे खेलकाे व्याग्ह्र प्रतिक्षामा रहेका नेपालीहरूलाई सन्दीपकाे डेब्यू र पाएकाे सफलताले झन‌ै शिखरमा पुर्याएकाे छ । आईपीएलमा अनुबन्ध भएदेखि नै चर्चामा […]
सांसद विकास कोष न‌ै अावश्यक छैन, विकास स्थानीय तह मार्फत नै गरियाेस्
नेपालपत्र, ५ जेठ २०७५ । सांसद विकास काेषकाे नाममा राज्यकाे सम्पत्तिकाे दुरूपयाेग हुँदै अाएकाे छ । विगतमा पनि सांसदले विकास काेषकाे रकमलाई सही सदुपयाेग गर्नुभन्दा पनि अाफ्ना कार्यकर्तालाई पाेस्ने माध्यम बन्द‌ै अाएकाे थियाे । त्यतिमात्र हाेइन रकम उपयाेग हुँदा पनि अावश्यक र जरूरी विकासभन्दा पनि भाेटर बैंक बढाउने माध्यममा मात्रै प्रयाेग गरेकाे अवस्था थियाे । […]
अबकाे नेपाली राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला?
नेपालपत्र, ४ जेठ २०७५ । नेपालकाे राजनैतिक इतिहासमा २०७५ साल जेठ ३ गते एउटा नयाँ घटनाक्रम थप भएकाे छ । विगतमा तिक्तता पूर्ण सम्बन्ध रहँदै अाएका दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीले २०७४ असाेज १७ वाट एकता गर्ने प्रकृया सुरू गरेर हिजाे मदन भण्डारी स्मृति दिवसमा एकता गर्न सफल भए । हिजाेवाट दुई ठुला कम्युनिष्ट मात्र एक […]
मदन स्मृति दिवसकै दिन एमाले र जबजको पनि अन्त्य !
नेपालपत्र, ३ जेठ २०७५ । अाज नेपालकाे राजनैतिक इतिहासमा नयाँ अध्यायकाे सुरूवात भएकाे छ । दुई ठुला पार्टी एक भएर ईतिहास रच्ने मात्र काम गरेका छैनन् वर्षै देखिकाे नेपाली जनताकाे चाहनासमेत पूरा गरेका छन् । अाजवाट नेपालकाे राजनीतिमा नेकपा एमाले र नेकपा माअाेवादी केन्द्र भन्ने पार्टी अस्तित्वमा छैनन् र नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकाे जन्म […]
एमाले-माअाेवादी एकता र परिवर्तन संस्थागत गर्ने अवसर
नेपालपत्र, २ जेठ २०७५ । लामाे प्रतिक्षापछि दुई ठूला पार्टी एकताले अन्तिम रूप लिन गइरहेकाे छ । नेकपा एमाले र नेकपा माअाेवादी केन्द्रले अघिल्लाे वर्षकाे दशैंताका गरेकाे घाेषणालाई भाेलि मूर्त रूप दिने तयारीमा लागेका छन् । सम्भवत कुनै अप्रत्यासित घटना अबकाे २४ घण्टासम्म भएन भने एमाले-माअाेवादी एकता पक्का हुनेछ । नेपाली जनताकाे विगतदेखि नेपालका बामपन्थी […]
नेपाली कांग्रेसकाे राष्ट्रियता, समाजवाद र मेलमिलापकाे नीति अनि अागामी कार्यदिशा
नेपालपत्र, १ जेठ २०७५ । नेपालकाे राजनैतिक इतिहासमा सबैभन्दा पुरानाे पार्टीकाे रूपमा स्थापित हुन सफल र देशकाे महत्वपूर्ण परिवर्तनमा मुख्य भूमिका खेलेकाे पार्टी हाे नेपाली कांग्रेस । त्यतिमात्र हाेइन लाेकतन्त्रकाे हिमायति मान्ने पार्टी पनि कांग्रेस हाे । विश्वमै कम्युनिष्टहरू तानाशाही हुन्छन् भनेर परिचित छन् । त्यसैले लाेकतान्त्रिक दल या पार्टी भनेकाे नै कांग्रेस हाे भन्ने […]
सरकार ! अब प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्रीलाई कारवाही हुन्छ कि हुन्न?
नेपालपत्र, ३१ वैशाख २०७५ । यही वैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीले नेपालकाे दुई दिने भ्रमणकाे सरूवात जनकपुरधामवाट गरेका थिए ।प्रधानमन्त्री माेदीलाई जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनसमेत गरियाे । नागरिक अभिनन्दनका क्रममा प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्रीले परराष्ट्र नीतिकाे ख्याल नै नगरी भारतीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासाे मात्र पाेखेनन्, माेदीलाई सहयाेग गरिदिन अाग्रहसमेत गर्न भ्याए । यसरी खुला […]
नेपाली बलर सन्दीपकाे अाईपीएल डेब्यु र प्रशंसा !
नेपालपत्र, ३० वैशाख २०७५ । नेपाली क्रिकेटका युवा खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई डिल्ली डियरडेभिल्सले अनुबन्ध गरेसँगै उनकाे चर्चा चुलिएकाे थियाे । त्यतिमात्र हाेईन याे पटककाे अाईपीएल नेपालीका लागि सन्दीपका कारण धेरै लाेकप्रिय भएकाे थियाे र उनकाे खेलकाे व्याग्ह्र प्रतिक्षामा रहेका नेपालीहरूलाई सन्दीपकाे डेब्यू र पाएकाे सफलताले झन‌ै शिखरमा पुर्याएकाे छ । आईपीएलमा अनुबन्ध भएदेखि नै चर्चामा […]
माेदीकाे नपाल भ्रमण र नेपाल सरकारले दिएकाे सन्देश
नेपालपत्र, २९ वैशाख २०७५ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे दुई दिने नेपाल भ्रमणले धेरै सन्देश दिएकाे छ । भ्रमण के कति सफल या असफल त्याे समयले बताउला तर एउटा स्पष्ट सन्देश चाहिँ याे दिएकाे छ कि सरकारले चाह्याे भने जे पनि सम्भव रहेछ । इच्छाशक्ति हुनु नै मुख्य कुरा हाे भन्ने देखिएकाे छ । प्रसंग […]
सरकार ! जनताकाे अपेक्षा कहिले पूरा गर्ने?
नेपालपत्र, २८ वैशाख २०७५ । सरकार भनेकाे जनताकाे इच्छा र अावश्यकता पूरा गर्छु भनेर जनमत लिएर शासन सञ्चालन गर्न पुगेका जनप्रतिनिधिकाे समूह हाे । जनताकाे विश्वास जितेर सत्तामा पुग्ने र त्यहि जनतालाई उपेक्षा गर्ने प्रवृति हावी भएकाे देखिन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहकाे विकास गर्ने भनेर अाश्वासन देखाएपनि व्यवहारत उक्त अवस्था पाइएकाे छैन । […]
काठमाण्डाै महानगरका मेयरसाब, कहिले बन्छ स्मार्ट सिटी?
नेपालपत्र, २७ वैशाख २०७५ । काठमाण्डाै महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले स्थानीय निकायकाे प्रमुख भएकाे एक वर्ष पुग्ने समय हुन लाग्याे । स्थानीय तहकाे चुनाव अगाडि मेयरसाबले स्मार्ट सिटी बनाउने सयदिनकाे कार्यसुची समावेश गरेर घाेषणा पत्रलाई विश्वास गरेर काठमाण्डा‌ैवासीले भाेट गरे । चुनाव अगाडि गरिएका वाचालाई मेयर शाक्यले केही समयसम्म दाेहाेर्याइ पनि रहे तर जब जब […]
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे जनकपुर भ्रमण र प्रदेश दुईले दिएकाे महत्व
नेपालपत्र, २६ वैशाख २०७५ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी यही वैशाख २८ मा दुई दिने नेपाल भ्रमणमा अाउँदै हुनुहुन्छ । भारतसँग निकट मानिएकाे प्रदेश नं. २ लाई नै यस पटककाे भ्रमणकाे पहिलाे गन्तव्यमा बनाउनुले धेरै कुराकाे संकेत गर्दछ । किन भारतीय प्रधानमन्त्रीले काठमाण्डाैलाई पहिलाे गन्तव्य बनाउन सकेनन् ? तत्कालै यस विषयमा कसैले गम्भीर भएर साेचेकाे […]
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीलाई तीन तीन स्थानमा नागरिक अभिनन्दन किन?
नेपालपत्र, २५ वैशाख २०७५ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी वैशाख २८ गते नेपालकाे दुई दिने अाैपचारिक भ्रमणमा अाउँदै हुनुहुन्छ। विश्वकाे अर्थतन्त्रमा ठूलाे स्थान हाँसिल गरेकाे देश र अाफ्नाे छिमेकी देशकाे प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा स्वागत गर्न पाउनु नेपालकाे अवसर हाे । तर नेपाल एक स्वतन्त्र राष्ट्र भएकाे र अाफ्नाे छुट्टै स्वाभिमान रहेकाले धेरै झुकेर सहानुभूति लिनु पनि […]
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदीकाे भ्रमण तयारी र अनावश्यक महत्व
नेपालपत्र, २४ वैशाख २०७५ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी केहिदिन भित्रै नेपालकाे अाैपचारिक भ्रमणमा नेपाल अाउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री माेदीले केपि अाेलीकाे भारत भ्रमणकाे एक महिना भित्रै नेपाल अाउन लाग्नुभएकाे हाे। माेदी यही वैशाख २८ गते सिधै जनकपुर अाउनुहुनेछ र त्यहाँ जनकपुरधाम घुम्नु हुनेछ । विगतमा भारतले नाकाबन्दी लगाएपछिकाे याे पहिलाे भारतीय प्रधानमन्त्रीकाे नेपाल भ्रमण […]
धरहराकाे पुन: निर्माण कहिले सकिन्छ सरकार !
धरहराकाे पुन: निर्माण कहिले सकिन्छ सरकार! नेपालपत्र, २३ वैशाख २०७५ । वि. सं. २०७२ सालकाे भूकम्पले काठमाण्डाैका अधिकांश ऐतिहासिक सम्पदाहरूमा क्षति पुगेकाे थियाे । काठमाण्डाैकाे अाकर्षणकाे रूपमा धरहरा पनि भूकम्पले ढालिदियाे । यसरी भूकम्पले क्षति गरेकाे तीन वर्ष पुरा भइसकेकाे छ तर अझै कहिले पुनःनिर्माण सुरू हुने टुङ्गाे छैन । अघिल्लाे पटक केपि अाेली प्रधानमन्त्री […]